Madaxwaynaha Dalka Maraykanka Barack Obama iyo Wafdi balaadhan oo uu hogaaminaayay ayaa maanta Si Heer Sare ah loogu soo dhaweeyay Madaxtooyada Kenya. - Cakaara News
Madaxwaynaha Dalka Maraykanka Barack Obama iyo Wafdi balaadhan oo uu hogaaminaayay ayaa maanta Si Heer Sare ah loogu soo dhaweeyay Madaxtooyada Kenya.
Nairobi(CN) Sabti July-26-2015.Madaxweyne Obama ayaa waxaa Madaxtooyada Dalka Kenya si diiran ugu soo dhaweeyay Madaxweynaha dalka Kenya Uhurro Kenyatta, ku-xigeenkiisa iyo Golihiisa wasiirada iyadoona Obama uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan Ciidamada kenya iyo kooxda baambayda waxaana loo riday 21 madfac.
Madaxwayne Obama halkaasi kulan kula qaatay Madaxda ugu sar-sareysa ee dalkaasi Kenya isagoona kala hadlaayay arrimo badan oo ay ka mid yihiin iskaashiga iyo taageerada sidii argagaxisada Al-qaida iyo faraca Al-Shabaab loo tirtiri lahaa kuwaasoo ka gaystay magaalada Nairobi Qaraxii dad badani ku nafwaayeen ee WEST-GATE.
Madaxweyne Obama ayaa furay shirka hal-abuurka arimaha Ganacsiga, waxaana uu ammaanay mustaqbalka dhaqaalaha iyo ganacsiga Afrika ay hiigsanayso.
Barack Obama ayaa markii uu galay Aqalka Madaxtooyada kenya ayaa waxaa loo riday 21 Madfac, waxaana uu salaan sharaf ka qaatay Ciidamada Kenya.
Obama ayaa saacadaha soo socda ku soo wajahan Caasimada dalka itoobiya iyadoona booqashadan madaxwaynaha maraykanku ay noqon doonto madaxwaynihii ugu horeeyay dalka maraykanka ee Booqasho Afrika ku yimaada.